YANDEX များအတွက် THUNDERBIRD ကို SETUP ကို - မည်သို့ဖြစ်စေ - 2019
မေးလ်ပရိုဂရမ်တစ်ခု Thunderbird ကို configure လုပ်နည်း
3G နှင့် LTE ကို - မြန်နှုန်းမြင့်မိုဘိုင်းအင်တာနက်ရန်လက်လှမ်းခွင့်ရသောဒေတာထုတ်လွှင့်စံချိန်စံညွှန်းများ။ အချို့ကိစ္စများတွင်အသုံးပြုသူဟာသူတို့ရဲ့အလုပ်ကန့်သတ်ထားရန်လိုအပ်ပေမည်။ ငါတို့သည်ဒါကြောင့် iPhone ပေါ်မှာလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ဘယ်လောက်, ယနေ့ကြည့်နေကြသည်။
အိုင်ဖုန်းပေါ်တွင် 3G / LTE ကိုပိတ်ခြင်း
မြန်နှုန်းမြင့်ဒေတာ transfer စံအသုံးပြုသူမှဖုန်း access ကိုကန့်သတ်ရန်အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်လိုအပ်သောနှင့်အများဆုံး banal များထဲမှစေခြင်းငှါ - ဘက်ထရီပါဝါကိုကယ်ဖို့။
Method ကို 1: iPhone ကိုချိန်ညှိမှုများ
သင့်ဖုန်းနှင့်ကို select လုပ်ပါအပေါ်ပွင့်လင်းချိန်ညှိမှုများ "ဆယ်လူလာ".
လာမယ့်မျက်နှာပြင်တွင်, မှ scroll "ဒေတာများကို Options ကို".
ကို Select လုပ်ပါ "Voice ကိုများနှင့်ဒေတာများ".
လိုချင်သော option ကိုရွေးချယ်ပါ။ အများဆုံးဘက်ထရီချွေတာတဲ့စစ်ဆေးမှုများန်းကျင်ကို install နိုင်ပါတယ်များအတွက် "2G"ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာ, ဒေတာနှုန်းကိုသိသိသာသာလျှော့ချလိမ့်မည်။
လိုချင်သော option ကို install လုပ်ပြီးသောအခါရိုးရိုးအပြင်အဆင်များနှင့်အတူဒိုးကိုပိတ်ဖို့ - ပြောင်းလဲမှုများချက်ချင်းလျှောက်ထားပါလိမ့်မည်။
Method ကို 2: လေယာဉ်ပျံ
iPhone ကိုလေယာဉ်ပေါ်တွင်, ဒါပေမယ့်လည်းသင်စမတ်ဖုန်းမိုဘိုင်းအင်တာနက် access ကိုအပေါ်လုံးဝကန့်သတ်ချင်ဘယ်မှာကိစ္စများတွင်သာအသုံးဝင်ပါလိမ့်မည်သည့်အထူးလေယာဉ် mode ကို, ပေးပါသည်။
အရေးကြီးသောဖုန်းကိုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုရန်လွယ်ကူလက်လှမ်းများအတွက်ထိန်းချုပ်မှုအချက်ဖော်ပြရန်ထိပ်ဆုံးမှအောက်ခြေကနေ iPhone ကို screen ပေါ်မှာ Whisk ။
လေယာဉ်နှင့်အတူ icon ပေါ်တွင်တစ်ချိန်က Tapnite ။ လေယာဉ်ပျံ mode ကို activated ဖြစ်ပါတယ် - ဤသူသည်သင်တို့မျက်နှာပြင်ရဲ့အထက်လက်ဝဲဘက်ထောင့်တွင်သက်ဆိုင်ရာအိုင်ကွန်ကိုပြောပြလိမ့်မယ်။
မိုဘိုင်းအင်တာနက်ကိုဝင်ရောက်ဖို့ဖုန်းကိုပြန်လာနိုင်ဖို့အတွက်ထိန်းချုပ်မှုကို item နှင့် tapnite ပြန်လည်ပြီးသားအကျွမ်းတဝင်အိုင်ကွန်ကိုပြန်မခေါ် - ပျံသန်းမှု mode ကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ထားသည်, နှင့်ဆက်သွယ်မှုပွနျလညျထူထောငျဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျပိတ်နိုင်ပါသည်ဘယ်လိုအိုင်ဖုန်း 3G ပေါ်ထွက်တွက်ဆဒါမှမဟုတ် LTE ကိုနိုင်ဘူးဆိုလျှင်, မှတ်ချက်များအတွက်သင့်ရဲ့မေးခွန်းများကိုမေးပါ။